पब्जी खेल्न नपाएर ९ कक्षामा पढ्ने छोराले घर छोडेर हिँडे, वृद्ध हजुरवुवा-हजुरआमा चि'न्ताले बिरामी (भिडियो हे'र्नुहोस) -
Homeसमाचारपब्जी खेल्न नपाएर ९ कक्षामा पढ्ने छोराले घर छोडेर हिँडे, वृद्ध हजुरवुवा-हजुरआमा चि’न्ताले बिरामी (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 27, 2021 admin समाचार 1154
सामाजिक संजालका कार’ण अहिले युवा पुस्ता वि’ग्रन थालेका छन् । वुटवलको कालिकानगरमा बस्ने मिना श्रेष्ठ अहिले आफ्ना छोरा जनक श्रेष्ठलाई विद्यालयमा ल्याएको रिज’ल्ट हेरेर गाली गरिन् । उनका ९ कक्षामा पढ्ने १६ वर्षका छोराको रिजल्ट आयो । रिजल्टमा दुई विषय लाग्यो त्यती बेला आमा केही बोलिनन् । तर दोस्रो पटक पनि ३ विषय लाग्यो, उनले छोरालाई सम्झा’इन् ।
श्रीमान कतारमा थिए । कतारमा रहेका श्रीमानलाई पनि छोरालाई विषय लागेको बारेमा जान’कारी दिइन् । हामीले खाइ नखाई, दुख गरेर तिमीलाई पढाएका छौं, तर तिमीले पढाइमा ध्यान दिएनौं भनेर स’म्झाएँ, उसको मोवाइल पनि खोसेर राखिदिएँ, आमा भन्छिन्, म बाहिर निस्कन्छु बहिनीलाई खाना पकाएर खान देउ भन्दै हिँडे । तर घरवाट फर्क’दा छोरालाई घरमा देखिन ।
उनले आफु साँझ घर फर्क’दा छोराको कितावहरु छरिएको देखिन्, छोराले लगाउने लुगा पनि थिएनन्, विद्यालयमा बुझा’उन भन्दै दिएको जन्मदर्ताको कागज पनि कोठामै छोडेका थिए । उनै छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै श्रीमान विदेशमा गएका छन् । आमाले पनि धेरै कुरामा आफ्नो मन बुझा’एकी छन् । मोवाइलमा पब्जी धेरै खेलेर छोराले पढाइ वि’गार्यो भनेर मोवाइल खोसिदिइन् ।
त्यही रि’सले उनका छोरा घर छोडेर हिँडेको आमाको भनाई छ । छोराको बारेमा भन्दा पनि आमाको मन निकै भक्का’निएको छ । आफ्नो कुरा सुनाउँदा उनको बोली गलामा अ’डिएको छ । जन्मदिएको छोरालाई त्यती सम्झाउने मेरो अधिकार छैन र ? उनले भनिन्, नाति ह’राएको भएर वृद्ध भएका हजुरबुवा हजुरआमा पनि चि’न्ता लागेर विरामी हुनुभएको छ , उनले भनिन्, विदेशमा भएका श्रीमान पनि दिनहुँ रुनु’हुन्छ । – इताजाखबरबाट
April 30, 2021 admin समाचार 440
सबैला नगरपालिकाकी पानोदेवी गुप्ता जनकपुरधामको वृद्धा’श्रममा बस्छिन्। ७५-८० वर्षकी देखिने उनलाई आफ्नो उमे’रबारे खास जानकारी छैन। बोल्न समेत अप्ठ्या’रो मान्छिन्। बोल्न नआउने होइन, आफूलाई सम्हाल्न चाह’न्छिन्। पानोदेवीलाई डर छ, कहीँ आफ्ना छोराका बारेमा धेरै भनुँला
May 2, 2021 admin समाचार 362
केहि समय अ’गाडी कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । मदनकृष्ण श्रेष्ठले पुरै परिवारमा सं’क्रमण फैलिएको जानकारी सामा’जिक सञ्जालबाट दिएका थिए । श्रेष्ठसहित परिवारमा छोरा, छोरी, बुहारी र नातिनी पाँचै ज’नालाई कोरोना पुष्टि भएको
March 14, 2021 admin समाचार 2152
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160384)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155266)